Emazantsi edolophu - Ikhaya le-Luxury, indawo kanokutsho yasedolophini - I-Airbnb
Emazantsi edolophu - Ikhaya le-Luxury, indawo kanokutsho yasedolophini
Iflethi enkulu kakhulu enesilingi ephezulu kunye noyilo lwakudala kunye neintanethi enejubane eliphezulu iza kuba yindawo efanelekileyo yokuphumla okanye yokusebenzela ekhaya. Kukho yonke into oyifunayo ukusuka kwizinto ezinokusetyenziswa kwigumbi lokuhlambela kunye nezinto zokupheka.
Le flethi okanye indlu ekwicomplex enamagumbi aliqela inazo zonke izinto ozidingayo ukuze uphole okanye usebenze kude. Isilingi ephezulu, uyilo lwale mihla kunye nefenitshala yakudala, ukukhanya kwemvelo okwaneleyo kwiifestile ezinkulu kunye neintanethi ekhawulezayo kwenza kube yindawo yokusebenzela kude okanye yeholide.
Kukho igumbi lokuhlambela evulekileyo elinebhafu enkulu kunye nezibane zobunewunewu, ikhitshi le-Art Nouveau kunye nendawo yokuphumla enkulu apho ungashiya khona isutikheyisi okanye iibhayisekile zakho. Бесплатная и безопасная парковка во дворе.
Ibhafu enkulu eneshawa nekhitshi elinento yonke yokupheka nenendawo eyongezelelekileyo kwiholo yokugcina iibhayisekile okanye iisutikheyisi zakho. Kukho indawo yokupaka esimahla nekhuselekileyo.
Eyona ndawo intle yokuhlala kulula ukuya kuyo, indawo yesixeko ikuvumela ukuba ukhawuleze ufike nakweyiphi na indawo, uze ubuke iindawo uhamba ngeenyawo.
Eyona ndawo ifanelekileyo yokuhamba, ukufikelela lula kwizithuthi zikawonke-wonke nemigama yokuhamba ukuya kwezona ndawo zinembali, iivenkile zokutyela, iikhefi, iivenkile kunye neemarike. Iindawo zokumisa iibhasi zikhona apho esitratweni.